निवेश | यस अनन्त ब्रह्माण्ड
पोस्ट शक्ति . पाप . पैसा . व्यर्थ . तथ्य . आर्थिक
- श्री, तिमी मेरो साँढेको यसको क्षेत्रमा देखेको छैन, जो भागे?
- छैन, म एक स्थानीय पैन छैन.
- श्री, र मलाई साँढेको वा स्थानीय पैन दिन?
- जब प्रभुहरूका देखि पैन – त्यसैले दिन, र muzhikou देखि भने – छ.
(को बेलारूसी इतिहास को तत्व)
प्रदान मानिसहरू कुनै पनि लागि मान्य छ.
तपाईं मान्छे नष्ट गर्न चाहनुहुन्छ? – nastrugai “Panov” बाट “मानिसहरू”.
कसरी विश्व पैसा बनाउन, जहाँ कुनै पनि वस्तु विनिमय आधारित राजस्व स्रोतहरू लागि बनाउन अप छ? कसरी लुकाउन, कि विश्व को आंशिक विनाश मा परिणाम कुनै पनि आय, किनभने यो otgryzanii ठूलो वा सानो टुक्रा आधारित छ “पेस्ट्री”? पाइ, जो अन्त गर्न निश्चित छ. Существует множество способов реализовать такие подлые замыслы.
केही ठाउँमा ऐतिहासिक एक सभ्य साम्राज्य गठन गर्ने प्रबन्ध भने, जो पनि एक हीरा कोठा किन्न सक्छन् – स्वाभाविक यो सबै आफैलाई कब्जा गर्न विभिन्न अपराधीहरूलाई देखि एक इच्छा छ. राम्रो, वा, हुनत, को, यो इच्छा देखि, तपाईं व्यवस्थित गर्न ठूलो भ्रम र अराजकता बनाउन भने.
दुई ब्वाँसा बारेमा भारतीय दृष्टान्त.
एक पटक एक समय मा एक पुराना भारतीय आफ्नो नाति एक जीवन सत्य खोल्न.
- हरेक मानिस त्यहाँ एक सङ्घर्ष हो, दुई ब्वाँसा बीच संघर्ष गर्न धेरै समान.
एक ब्वाँसो दुष्ट प्रतिनिधित्व - डाह, डाह, पछुताउनु, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, falsehood…
अन्य ब्वाँसो राम्रो छ - शान्ति, प्रेम, आशा, सत्य, दया, लोयल्टी…
सानो भारतीय, कोर शब्दहरू हजुरबुबा गर्न छोयो,
सोच केही क्षणमा लागि, त्यसपछि उहाँले आग्रह:
- अनि के अन्त WINS मा ब्वाँसो छ?
पुरानो भारतीय अलिकति मुस्कुराया र जवाफ दिनुभयो:
- सधैं ब्वाँसो जीत, जो तपाईं खुवाउन.
तपाईं भनाइ पालना भने “मानिस एक ब्वाँसो छ” – धेरै प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ.
ल्याटिन देखि: मानिस एक ब्वाँसो छ [होमो khomini lyupus सेल).
को «Asinaria» प्ले ("गधा हास्य") रोमन लेखक र playwright Plautus (तीतस Plautus Maktsiy, ca.. 250 - 184 ई.पू.. ई।).
यो अभिव्यक्ति अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक थोमस Hobbes लोकप्रिय धन्यवाद दोस्रो जीवन फेला र भएको छ (1-588-1679), जो यो आफ्नो काम मा प्रयोग "Leviathan" (कुनै. 1, हेर्न. 14). उहाँले "सबै विरुद्ध सबै को युद्ध" आफ्नो थियोसिस टिप्पणी, कि, को राज्य हो, जो मानव समुदाय सम्म को विशेषता थियो राज्य संस्थान…
यसैले यसलाई निष्कर्षमा पुग्न सजिलो छ, कि सबैलाई – केहि ब्वाँसो छ. र ती ब्वाँसा बच्न, खाना पाउन. सजिलो तरिका – मार्न र कमजोर र defenseless खान. वा यस्तो तरिकाले व्यवहार, धेरै खुवाउन चाहेको ब्वाँसो जस्तै उल्लेखनीय छ. तपाईंले केही उच्च स्थिति लाग्न सक्छ त, यो के गर्न – त्यसपछि एक उच्च स्तरमा Aspire हुनेछ सबै अपमानित, на котором уже поджидает всех хитрый волк.
तथ्यलाई दिइएको, त्यहाँ भिन्न छन् भनेर भोक को प्रकारका, धूर्त ब्वाँसो सधैं सन्तुष्ट हुन. र आनन्द को भ्रम तिनीहरूलाई खुवाउन, सामान्यतया, तिनीहरूले, जो पछि regretted.
ग्रह मृत्यु यी कारणहरू मध्ये एक अनुसार, धेरै बासिन्दा घरेलू वेश्यावृत्ति मा संलग्न छन्. कारण यो अराजकता परिवार र परिवार सम्बन्ध मा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उत्पन्न भएको छ, जो परिवार बाट र अनियमित बच्चाहरु को जन्म लागि पैसा पम्पिंग लागि संभावना खोल्छ जसलाई देखि अस्पष्ट छ. यो अवस्था लामो समय को लागि जारी यदि – यो संसारमा जीवन एक ठूलो दुर्घटना परिवर्तन छ.
सक्षम कुनै पनि तरिका मा जैविक खाद्य आफैलाई स्वतन्त्र हरेक नागरिक प्राप्त गर्न भने – शरीर बढी सूक्ष्म शरीर केही आवश्यकता को सन्तुष्टि कठिन प्रतिद्वन्द्वीको भाग लिन आवश्यक बन्न सक्छ, साझेदार वा पूरक आधा.
पुरुषहरु र महिलाहरुको मा ब्वाँसा विभाजन, स्थापना गर्न सजिलो, ब्वाँसो छ कि भावनात्मक भोक अनुभव, जो महिलाहरुको सम्पर्क गर्न जाने छैन (अवसर कुरा छैन). जो अन्तर्गत संसारमा अवस्थाको सिर्जना गर्न कहाँ सबै ब्वाँसा को आवश्यकता सन्तुष्ट, अग्रणी जीवन शैली, जो प्रकृति र वातावरण प्रति निष्ठूर मनोवृत्ति गर्न peculiar छ – यस्तो ब्वाँसा को सफल विकास संसार र यसको जनसंख्या पूरा लोप नेतृत्व गर्नेछ. यस, ब्वाँसा रुचाउने, महिलाहरुको धेरै शान्ति विरुद्ध अपराधको प्रतिबद्ध, पुरुषहरु र जलाएर छलफल विश्व दुवै. र सारा संसार आफ्नै घातक भविष्य गर्न दृढ सार्दा छ. एकै समयमा तिनीहरूले चिन्ता छैन, यस बारे के भोक ब्वाँसा लाग्छ.
हेर्न गाह्रो छैन, कि नस्ल को स्थिर degeneration यस्तै दुनिया मा हुनेछ. र लाभ बकवास र फोहोर ब्वाँसा को चंगुल छ, जो आफ्नै लाभ र जहाँ podvernotsya बकवास संकोच छैन अल्पकालीन whims भेट्न, जारी जीवन शैली रद्दीटोकरीमा, एक विशाल stinking फोहोर मा वरिपरिको विश्व खोल्दै. आखिर,, कुनै पनि JERK यदि “अहिले” – “त्यसपछि” पहिले नै बस काम गर्ने छैन (किनभने कुनै एक हुनेछ). यसरी, राजा बन्न smerdy केही चक्र भित्र, किनभने मा अनुवाद Name नस्ल ब्वाँसा बाँच्न छैन.
सकेसम्म अक्सर धुन प्रयास Smerdy. यो आफ्नो डीएनए को peculiarities कारण छ, कारण जो आफ्नो शरीर निरन्तर stinks छ. किनभने संसारमा पानी यो खर्चालु प्रयोग धेरै पटक छिटो रद्दीटोकरीमा मोड़.
फलस्वरूप,, brazenly stinking राजनीति खडा purebred महिलाहरुको गल्ती बनाउन र ब्वाँसा बकवास को सन्तान दिन करमा पार्दछ. कारण यस नस्ल को एक तीव्र गिरावट छ (कारण एउटै गल्ती को cyclicality गर्न), र राजकुमार सामान्य विकास को अन्तिम चक्र मा थप सिद्ध फारम लिन, festering maggots को स्तरमा विघटित. यो विजयोल्लास मार्च को बकवास ब्वाँसा जल छ, यसको अन्तिम मा खोजिरहेका “उज्ज्वल” भविष्यमा. तिनीहरूलाई यहोवाको निर्वासनमा को आशाहीनता अवशोषित गरौं, Пространства Жизни и Пространства Планеты.
आफ्नै स्थिति बलियो गर्न सुरक्षित अनियमित राजा समानता को भ्रम फैलाउन सक्छ, आफ्नै विफलता ढाकछोप र आधिकारिक स्थिति inconsistency गर्न, продолжая одурачивать Мир, कतै जाने.
समानता – बरु illusory अवधारणा, जो अन्याय नियम अन्तर्गत लागि मात्र आवश्यक छ, कि व्याप्त bydlota निर्णयमा लिए bamboozled, कि लाभ durachilam. आम tupizna – सफल र दीर्घकालीन हैकम बकवास ब्वाँसा गर्न प्रमुख.
समाज को वित्त decaying खण्डहरू आफ्नो व्यापक निम्त्याउँछ. कुनै पनि जीवन-affirming निर्देशन को गठन र विकास दबा गर्न सक्छन्. जसबाट विद्यमान कुनै पनि प्रतियोगिता र खतरा गायब अधिकारीहरूले.
बहुमत नियम (यो के समानता द्वारा चाहनुभएको छ) सफलतापूर्वक गुणात्मक विकास केन्द्र दबा, संसारको एउटा अनिच्छा instilling, मा जहाँ यो छ “सबै भन्दा”. प्राकृतिक वातावरण प्रकृति माथि जीवाणु शक्ति एक एनालग मोडेल छ: बस बहुमत रोगाणु, र केवल तिनीहरूले लाग्न सक्छ “सही” निर्णय, किनभने जीवाणुहरू – प्रकृति सबैभन्दा बुद्धिमान् प्राणीहरूलाई, तिनीहरूलाई प्रत्येक चलाख, पनि, प्रकृति आफु भन्दा.
तपाईं जीवाणुहरू लागि हतियार दिन सक्छ, त्यसैले तिनीहरू यसलाई आफ्नो मन राख्न. र सबैलाई त्यसपछि आफ्नो प्रतिभा काम को उत्पादन हेर्न सक्षम हुनेछ, जो, तथापि, धेरै धूलो फरक हुनेछ छैन. आखिर,, सशस्त्र जीवाणु गरिरहेका छन् “असाधारण राम्रो र व्यापक प्रकाश”.
अवस्थित विपरीत, जो विकास र आफ्नै काम र श्रम को उपलब्धिहरू द्वारा बाँच्न, परजीवी को खर्च मा बाँच्न, कि आंसू गर्न व्यवस्थित, चुटकी, जो माथि parasitize वस्तु मा चूसना. अर्को शब्दमा, यो वस्तु यदि – सारा राष्ट्र – vermin, आफ्नो सेना gnawing र चूसने, धन, सम्पत्ति, सम्भावित, खर्च जो पराश्रयिता बढि धूर्त प्रविधी र संगठनको निर्माणमा हिंसात्मक मान्छे नियन्त्रण प्रणाली थियो प्राप्त विषय छ. यसरी क्रममा परजीवी आर्थिक मानिसहरू आफू, तिनीहरूले नाश गरेको, र यो सबैभन्दा भयानक गरे.
“प्रतिभावानबाट”, प्राकृतिक नियमहरू perverts स्पेस पूर्ण उपचार क्लिनिक तोकिएको छ.
कुनै पनि प्रणाली को काम ताप प्रणालीबाट धेरै फरक छैन. जो, पाठ्यक्रम, हामी इन्धन आवश्यक, तापीय ऊर्जा उत्पादन गर्न. तरल हीट, सामान्यतया, प्रयोग आगो, र आगो इन्धन दहन को एक परिणाम रूपमा प्राप्त छ, जो काठ र काठ को एक टुक्रा हुन सक्छ.
त्यसै गरी, यसको अस्तित्व लागि वित्तीय प्रणाली ऊर्जा स्थिर आपूर्ति आवश्यक. तर जहाँ उनको भाइ छ?
बाँकी ऊर्जा – यो वस्तु भित्र निहित छ कि ऊर्जा छ, यो घटना मात्र निकाल्न सम्भव छ, तपाईं वस्तु नष्ट यदि, वा यसको आकार को स्थिरता अबरोध. के आगो मा वस्तु दहन मार्फत हासिल गर्न सकिन्छ. यस मामला मा, त्यो पूर्ण र आरक्षित बिना बाल्न बाध्य हुनेछन्.
कुनै पनि चेतना यसको आफ्नै निष्ठा छ, ऊर्जा को जारी गर्न जान्छ जो क्षरण, जो वित्तीय प्रणालीको अस्तित्व लागि आवश्यक छ. यो मानव जगतले वित्तीय प्रणाली वा वित्तीय इन्धन मा आगो लग छन्. र त्यहाँ छ भने सचेत भएको निष्ठालाई उल्लङ्घन – यो flames प्रणालीमा बल्छ, छोडूँगा गर्दैन नगर्ने जो कोहीलाई पनि.
मृत्युको ग्रहमा निजी सम्पत्ति को चोरी बारम्बार अवस्थामा छन्, जब “पुरानो dross”, आधिकारिक स्थितिको फाइदा लिइरहेको, को प्रतिभाशाली युवा मूर्ख, संसारको आफ्नो विकास र समझ गर्न अवरोध स्थापना. अँध्यारो र अनिश्चितता एक लामो समय को लागि उनलाई पकड, रद्दीटोकरीमा ज्यान को सबै भन्दा राम्रो वर्ष पठाउन.
मानसिक बिरामी आयोजकहरु विनाश प्रणाली आकर्षक नियुक्त, आगो Banishing लाइट को प्रकाश मा brightest यात्रा.
हामी परम्परा कुरा भने, अवस्थित मृत्यु ग्रह – यो क्रान्ति बेवास्ता गर्न सम्भव छैन, जो व्यवस्थामा परिवर्तन उपग्रहहरु मानिन्छ.
उहाँले अर्को प्रतिस्थापन रूपमा आफ्नो खुट्टा एक राज्य बन्न समय छैन, थप “सिद्ध”. तर खुट्टा जहाँ यस्तो मा बढ्न “सिद्ध”?
सामान्यतया क्रान्तिको त्यसपछि हुन, गम्भीर गर्दा (तर सबैभन्दा ठूलो) “अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी”, यसलाई बनाउन जाँदै छ “सवार भएर बैठ”.
आफ्नै unshakable शक्ति बचत र सुरक्षित आरामदायक भविष्य chernosuschnostnye संगठनहरूसित पनि खोलियो हतियार को सम्भावित कब्जा भ्रम व्यवस्था गर्न “प्रमुख खेलाडी”. र क्रान्तिको जीवनमा पछि, जस्तै, राम्रो रही, तर केवल किनभने, नयाँ क्षमता समावेश छ, हुनत यो लामो छैन लामो.
थप क्रान्ति हो, जब यो “Oparin”, आफ्नै अस्तित्वको आशाहीनता साकार, भ्रमण गर्न खोज्ने (कम से कम एक लामो समय को लागि छैन) को शाही सिंहासन, पनि पुरा देश को जीवन को लागत र धन मा. उहाँले एक पूर्ण यसको साँचो प्रकृति थाह छ, जहाँ त्यहाँ मात्र latrine pits ठाउँ छ. यस, यदि सम्भव छ भने “maggots” सबै incinerate तयार, आफ्नो जीवनमा राम्रो संभावनाहरु र त्यहाँ कहिल्यै हुनेछ.
कारण बौद्धिक काम को उत्पादन “maggots” र “एडी मुखासे” प्रकाश यस्तो प्रणाली उपकरण जीवन मा जन्मिएको छ, सबै भन्दा पवित्र अन्तर्गत, गम्भीर र ठूलो slogans सजिलै केही लागि यसको पूर्व महिमा र शक्ति नष्ट 100 वर्ष. “Oparışam” एक सय वर्ष पर्याप्त, पिट latrine मा एक हीरा केन्द्र संग पौराणिक देश बारी.
यदि नागरिक सेवकहरूको संख्या शानदार सुधारवादी देखिन्छ, क्रान्तिको आवश्यकता समाप्त गर्न सक्षम – पहिलो यस्तो हत्या. उदाहरणका लागि, एक पटक अपराधीहरूलाई को मृत्यु गिरोह को ग्रह को एक मा मरेको मानिसको नाम Stolypin द्वारा गोली थियो, र आफ्नो सुधार चीन मा लागू गरियो. जसद्वारा चीन को जनसंख्या tenfold हुर्किसकेका छ (आधा त्यहाँ अवैध) , र रूस जनसंख्या आधा द्वारा संकुचित र अस्वीकार गर्न जारी छ.
कुनै दोष, कि शुद्ध चेतना एक पिट latrine बस्न चाहनुहुन्छ छैन, तर दोषी, यस पिट संगठित: शायद यो एक ठूलो सडक र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक एउटा नाम, उपनाम संग एक गंजा gangster केही प्रकारको छ. जो frontloading र उप-पुनरुत्थान संग संख्या मा 13-गुना ड्रप गरेको गुणस्तर कामको लागि एक इनाम हुनुपर्छ. सबै समान तानाशाहहरूले त्यस्तै पुरस्कृत हुनुपर्छ. तर प्रमाण सुझाव, कि सबै लीना मा दोषी छ, जहाँ उहाँले एक प्रशंसक भए. बस जस्तो, र noticeably कमजोर नाजुक महिला सारा साम्राज्य नष्ट र धेरै वर्ष को लागि विश्वका सबै जनसंख्याको अराजकता होमियो छ. आफ्नै भावना वा विचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुको देखि Tolley, कि को felts एक गोप्य समाज को काम प्रदर्शन, वा के एक विदेशी थियो देखि हटाइएका. त्यसैले, “lena” लीनो-जस्तो र सुनाइसकेको जैविक दायित्व को एक छली र कार्यान्वयनको नियन्त्रणमा राखिएको, वा अनाज्ञाकारिताले मामला मा एक विशिष्ट expulsion गर्न.
सुविधाहरू क्रांतियों छन्, कि यसको सफल निष्कर्षमा आवश्यक अवरोधन उत्पन्न गर्न पूर्व “सरकार स्क्रैप” अयोग्य हात. र व्यावसायिक sudbolovy यसरी नव गरे lomoverzhtsev मा रूपान्तरित. क्रान्तिको निष्पक्ष छैन.
TK. “maggots” पिट देखि latrines प्रतिस्पर्धा आफ्नै कमी राम्ररी थाह छन् – तिनीहरूले गोलीले र handgun को मद्दत सबै प्रतियोगिहरु नष्ट, र धोखा मान्छे लामो delves: “के, पछि सबै, छ?” अब देखि एक सय वर्ष (तिनीहरूले भित्र पस्नु गर्दा) तिनीहरूले भग्नावशेष गाउनेछु, तिनीहरूले पनि अनुभवहीन थिए.
धोखा मान्छे को सफल टेकओभर पछि “चार्ज” काम, र धूर्त डाकुओं जन्मजात बनानु सुरु “पाइ”. र कसरी!? यस्तो देशहरूमा विकास गर्न जाँदैछन्, किनभने यो कम्तिमा केही बीच विभाजित छ, कि पायो.
र भलपाराइसो हतार onsam,
Onduri द्वारा हतारिएको rubles.
तपाईं र, madman, प्रयास,
त्यो धारिलो चक्कु रगतमा झूट.
माथिको प्रक्रिया कब्जा कोष द्वारा बढ, पूर्व चोर र अपराधी आधुनिक लगानीकर्ताले परिवर्तन. र के गर्न सुरु “राम्रो”. यो नष्ट देशहरूको भग्नावशेष मा नयाँ आधुनिक सुविधाहरु को निर्माण हुन सक्छ. स्थानीय जनसंख्या लागि एक महान र परोपकारी लगानीकर्ताले रूपमा आफ्नो सम्मान र आदर गर्न सुरु, र rejoices, यदि तिनीहरूले उपलब्ध क्षेत्र मा एक बिखरे बन्दोबस्त उत्पादन. को पाठ्यक्रम, समय द्वारा तिनीहरूले विदेशीहरू रूपमा चिनिन्थे, किनभने उनीहरू देश छोड्ने बाध्य भए, हनन उनको शान्तपूर्वक र जानाजानी गर्न. कि, पागल गडबड जाँदै ग्रह को मृत्यु मा.
यो अक्सर यस्तो ठाउँमा baryzhnichestva विदेशी मुद्राहरू हुन्छ. एक ठूलो पर्याप्त वित्तीय क्षमता huckster को संग्रह यसलाई आफ्नो बैंक खुल्छ र साइन अन्तर्गत पहिले नै अवैध गतिविधिहरु स्वामित्व जारी “व्यवस्था”. गर्न सक्छन् “व्यवस्था” यो नै huckster द्वारा लेखिएको छ?
शक्तिको Doryvayas, विना अधिकार घुस्ने व्यक्ति lurking बिस्तारै र covertly क्रान्तिकारी लागू गर्न सुरु “कानून”. पनि, यदि शक्ति आधिकारिक द्वारा प्राप्त भएको छ – आफ्नो काम को एक परिणाम रूपमा पक्कै छ, कि “कानून” त्यहाँ एउटा क्रान्तिमा थियो. जो समाप्त, मानिसहरू वा भविष्यमा नयाँ शासक रहिरहन्छ “केही संग”: त्यो पीडित र अपराधको लागि दोष भालु, उहाँले प्रतिबद्ध छैन कि, र, पनि, यसलाई विरुद्ध थियो भने – म यो सबै रोक्न सक्षम थिएन.
अपराधीहरूलाई लागि सबै यो अर्थहीन क्रममा आवश्यक छ, प्रत्येक व्यक्ति अवस्था एक एकल बटन नियन्त्रण गर्न. यस्तो सिर्जना “पुस-बटन समाधान” – विचार एकदम सरल छैन. यो कार्यान्वयन यसको राम्रो दिमाग लागि उपयोग गर्दै, यसबाहेक, विभिन्न pretexts अन्तर्गत: केही प्रतिज्ञा मार्न छैन, अर्थपूर्ण बनाउन अन्य प्रतिज्ञा, कसैले भर्खरै सट्टा unloved मनपर्ने काममा संलग्न दे. तर अन्त मा उनि एउटा बटन समाधान सिर्जना, जो प्रत्येक ग्रह मा कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध निर्देशित छ (सृष्टिकर्ता आफैले विरुद्ध सहित) त्यसैले, कि “बटन” यो अपराधीहरूलाई को हात मा छ.
एक हुँदा “नीरस” तीन-बटन नियन्त्रण सबै बौद्धिक – यसलाई भनिन्छ “व्यापार“.
यदि “व्यापार” ठूलो आर्थिक लाभ उत्पन्न गर्न ceases – व्यवसायी दुर्घटना र fatalities को मद्दत गर्न resorted छ. उत्तरार्द्ध खाँचोमा परेका दिनेछु किनभने, प्राथमिक आवश्यकता हो, र पनि निःशुल्क काम गर्न इच्छुक भेट्न.
“शोक” – यहाँ लाभ को सबै भन्दा राम्रो स्रोत.
कारण व्यापक उत्तेजना foci गर्न “अरूको पीडित” मृत्यु ग्रह नियन्त्रण अराजकता मा शासनकालमै, जसमा कुनै पनि जीवन-affirming प्रवाह गर्ने सम्भावित गठन र विकास. विश्व किनभने, जसमा “महिलाहरुको” तपाईं संग fuck छैन, म रक्षा गर्न चाहँदैनन्. छैन यो छ?
5`Nizza - यो
डीडीटी – जब तेल चल्छ
Согласен со всем выше сказанным(написанным.) Ежели бы “быдло” о том знало, को”maggots”,жили в г… На своей родине:)
पेश आवेदन प्रक्रिया